Kitra – « Chan 2018 » : hidona amin’i Malawi ny Barea | NewsMada
Kitra – « Chan 2018 » : hidona amin’i Malawi ny Barea
Handray anjara amin’ny fifanintsanana, hiadian-toerana amin’ny andiany fahadimy amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Afrika, ho an’ireo mpilalao tsy milalao any ivelany (expatriés), taranja baolina kitra, «Chan», ny Barea de Madagascar. Hotanterahina any Kenya, ny 11 janoary ka hatramin’ny 2 febroary 2018 izao ny fihaonana.
Araka ny antsapaka, handray an’i Malawi ny Barea eo amin’ny fihodinana voalohany. Lalao tanterahina ny 20 na 22 aprily ho avy izao. Ny 28 na 30 aprily kosa ny lalao miverina any Lilongwe. Ny 14 na 16 jolay kosa ny fihodinana faharoa ka hampiantrano an’i Mozambika indray isika ary hiatrika ny lalao miverina any Maputo ny 21 na 23 jolay.
Hifandona amin’ny tafavoaka eo amin’i Maorisy na i Seychelles na i Angola kosa ny Barea eo amin’ny fihodinana fahatelo, raha toa ka tafavoaka eo amin’ireo lalao hatrehiny amin’i Malawi sy Mozambika. Hatao eto Madagasikara ny 11 na 13 aogositra ny lalao mandroso ary ny 18 na 20 aogositra kosa ny lalao miverina.
Marihina fa ao amin’ny faritra atsimon’i Afrika no misy ny Barea, miaraka amin’i Angola, i Botsoanà, i Kaomoro, i Lesotho, i Malawi, i Maorisy, i Mozambika, i Namibia, i Seychelles, i Afrika Atsimo, i Soazilande, i Zambia ary i Zimbaboe.